トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ marxaladda soo-kabashada Guud ee tii pachinko ah, feature-arki jidka
※ sidoo kale la soo dhaafay
qowladda pachinko Fadlan tixraac sida dhaqankan cusub ee warshadaha oo dhan sababtoo ah waa shirkad ganacsi waa inuu ahaado mid faa'iido maalin kasta. Haddii ay sidaas tahay u malayn, laakiin waa tarjumaadda sidoo kale ka arki kartaa in muddada kasta oo dib u soo kabashada maalintii, iyaga ka mid ah, maanta waa in la eegaayo in faa'iidada weyn badan sida caadiga ah, oo run ah taariikhda ururinta ku xusan in qowladda pachinko uu noqon doono. Oo maalintaas sida ururinta ah, si aanay u noqon khasaare ballaaran, bal aynu eegno sida ay u aqoonsadaan in doonista lahaa maalin ayaa la helay.
sidoo kale in qolkii martida pachinko inay ka qayb galaan qof kasta ah, waxaan u malaynayaa in ay jirto xaqiiqada ah waa maalin run. qowladda Pachinko taariikhda ururinta, dukaamo badan oo si xun ugu qeybtii labaad ee bisha arkay. Tani waxay kala duwanaan doontaa iyadoo ku xiran waqtiga oo ka mid ah dukaamada dhacdooyinka iyo bedelka Xintai. The Sida loo aqoonsado dhowr maalmood ka dib markii muddo sida dib u soo kabashada ah, waxaad weli doono sixitaanka cidiyaha. khadadka xadka
, sida kala go'do, laakiin waa dabeecadda muddada daran kabashada sixitaanka ciddiyaha, waxaa jira qayb ka mid ah in aan doonayo in aan sii eegaya kale. Waa, haddii heshay waxaa isla markiiba reebay, waa in ama ma. In la eego pachinko in meelmarin ah, loo yaqaan Ty ah. jarida Ty ah, waxaa u qabata sixitaanka dhidib kale oo aan ahayn bilowga, iyo Chirase kubada, waa hab si loo yareeyo saamiga inay soo galaan bilowga iyo weeraryahanka.
Sidoo kale, haddii Re Chirase kubada, ayaa sidoo kale sii xumaatay kubad ka dib markii Ghanna ah, isla markiiba waxaan kubada baxay baaba'aa. In marxaladda soo-kabashada qowladda pachinko ah, waxa uu noqday meesha haysa badan ee sida sixitaanka dhidib ah. Si aad u kala soocaan dhidibkii, laakiin waa kuwo ku adag, hannaankii Toka waxaa wareejiyo marar badan, haddii aragtida ah in kubada la isla markiiba reebay, inaad si fiican u qallafsan Haddii aad tahay kartaa pachinko play yaqaan. Maadaama aad sheegaya in sifooyinka dhacaan sixitaanka ciddiyaha xilliga dib u soo kabashada, fadlan xasuuso walba. In the case of
Hanemono, waa in aad si gaar ah u macaamilooday isha ku dhibcood sida. Intaa waxaa dheer, in ay dhacdo sida mashiinka CR, sidaas waxaa sidoo kale waa wax macquul ah in sixitaanka ee jidka Horukon, oo ku saabsan waxa ay sidoo kale wanaagsan noqon lahayd in ay sii xataa in geeska a madaxa. maalmaha fasaxa
iyo maalmaha fasaxa, pachinko oo idinka mid ah ayaa sidoo kale la goostay sida aad ogtahay dukaanka wuxuu noqon doonaa badan. Tani gaar ahaan waa, sida dukaamada idaacadda iyo dukaamo kobcaya, waxaad badanaa u muuqdaan doona in uu kaydiyo macaamiisha ah waa in xataa maalmaha shaqada. Sida dukaamada magaalada hareeraheeda ah, in dukaanka in aan la filayaa in uu ordo maalmaha shaqada, beddelo mid ka mid ah sabti iyo axad saaray, waxaa sidoo kale ku jira ayaa sidoo kale dukaamada in ay fuliyaan ganacsiga, sida in la soo ururiyay.
Oo, in la soo kabsaday lahaa taariikhda in kasta oo tii pachinko, waxaa jira maalin ah oo uu soo go'an. Waa, Xintai geeska ka inta lagu guda jiro fasaxa Golden Week iyo furin ilaa xiga cusub ayaa sidoo kale loo dayac tiray, laakiin ilaa iyo dhamaadka bisha ka 25-ka bil kasta aad. Ilaa ee 25-ka bil kasta fasaxa oo xiriir ah, tan iyo bariis xataa arkay iibka sare faa'iido guud ayaa la filayaa, waxay had iyo jeer soo kabsaday doonaa in kooxda martida pachinko ah.
Intaa waxaa dheer, kuwii xiisaynayso ee wargeysyada, iwm sidoo kale Xintai waa, si aad ka adiga kuu gaar ah u ciyaaro, aad uma baahna in ay dibadda u saaray. biilka mashiin waa in sidoo kale la soo ururiyay, waxaa la soo kabsaday Xaqee taagan ciyaarta. Xintai waxaa sidoo kale ku dhacay maalinteedii kowaad Xintai, waa in uu jiro itimaalka in arrimaha ugu wanaagsan ee lagu dhufan markii deji yar markiiba. Iyo aragti
qowladda pachinko taariikhda ururinta ah, fadlan ka taxadir in aadan maalgashi ku xadgudba. Si kastaba ha ahaatee, in ama aan taariikhda ururinta, kaliya waxaan ku arkay, sababtoo ah ma aad u badan ogahay, ka soo bixi doonaan baahida in gabi ahaanba ku dhuftay. Si ooy ugu yaraan maalgashiga, dukaamada of xaaladda iyo ciddiyaha Sida habboon, waxa uu noqday in lagu arko xitaa wax yar. Si aad u ciyaaro, et al., Waxay leedahay uma baahna in ay dibadda u saaray. biilka mashiin waa in sidoo kale la soo ururiyay, waxaa la soo kabsaday Xaqee taagan ciyaarta. Xintai waxaa sidoo kale ku dhacay maalinteedii kowaad Xintai, waa in uu jiro itimaalka in arrimaha ugu wanaagsan ee lagu dhufan markii deji yar markiiba. Iyo aragti
qowladda pachinko taariikhda ururinta ah, fadlan ka taxadir in aadan maalgashi ku xadgudba. Si kastaba ha ahaatee, in ama aan taariikhda ururinta, kaliya waxaan ku arkay, sababtoo ah ma aad u badan ogahay, ka soo bixi doonaan baahida in gabi ahaanba ku dhuftay. Si ooy ugu yaraan maalgashiga, dukaamada of xaaladda iyo ciddiyaha Sida habboon, waxa uu noqday in lagu arko xitaa wax yar.